हात खुट्टा किन झमझमाउछ वा निदाउँछ ? हात खुट्टा झमझमाउदा वा निदाउँदा के समस्या हुन्छ ? हात खुट्टा के कारण ले झमझामाउछन् ? वा निदाउँछन्, भन्ने विषयमा अति नै महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
हाम्रो शरीर को प्रत्येक अंगहरुमा मस्तिस्कलाई सुचना दिने कोशीय फाइबर नसाहरू रहेको हुन्छन । शरीर को प्रत्येक अङगहरुको सुचना उक्त कोशीय फाइबर नसाले फरक-फरक सूचनाहरुलाई मस्तिस्कमा पुर्याउने काम गर्छ ।
पलेटी मारेर धेरैबेर बसेर उठ्दा खुट्टा निदाएर टेक्नै नसकिने भएको हुन्छ । यदि पलेटी मारेर बस्दा खुट्टा निदाउछ भने बिस्तारै-बिस्तारै खुट्टाको पैतलामा समस्या हुन सक्छ । त्यसैले पलेटी मारेर धेरै समय नबस्नुहोस् ।
उमेर जति बढ्दै गयो त्यती नै हामिलाई विभिन्न रोगले च्याप्दै जाने गर्छ । तर पनी हात खुट्टा निदाउने समस्या यदि निरन्तर भइरहे डाक्टर सँग परामर्स गरेर डाक्टरले के-को कारण ले हात खुट्टा निदाइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने छन् ।